सोफियाले नग्न तस्बिर इन्स्टग्राममा सेयर गरेपछि.... Kasthamandap Daily
सोफियाले नग्न तस्बिर इन्स्टग्राममा सेयर गरेपछि....
कन्ट्रोभर्सी क्विन सोफिया हयात एकपटक पुनः चर्चामा छिन् । नन बनेपछि विवाह त्यसपछि सम्बन्धविच्छेद र अब नग्न फोटोसुटको चक्करमा उनी चर्चामा छाइरहन्छिन् । सोफियाले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एउटा तस्बिर सेयर गरेकी थिइन् । यो तस्बिर सेयर गर्दै उनले लेखिन्, ‘भगवान् लज्जाभन्दा माथि छन् । यदि ‘डिभाइन मदर’ खुल्ला रुपमा तपाईं अघिल्तिर आउनुभयो भने के तपाईं उहाँलाई लाज लागेन भनेर सोध्नुहुन्छ ? या सायद तपाईंले आफैं सोध्नुपर्छ कि तपाईंको दिमागमा लाज किन छ ?’
अब सोफियाले ईश्वरको कुरा गरेर तस्बिर सेयर गरिन् । तर इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्तालाई यो तस्बिर अश्लिल लाग्यो । त्यसपछि तस्बिरमा विभिन्न प्रकारको कमेन्ट आउन थाल्यो । कतिले त उनको तस्बिरलाई बलात्कारको कारण नै बताए । कुरबान नामका एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘भारतमा बढ्दो बलात्कारको घटनाको वास्तविक कारण तपाईं नै हो । यदि देशमा नग्नतालाई बढाउने महिलाविरुद्ध कदम उठाइयो भने बलात्कारको घटना समाप्त हुन्छ ।’
यो कमेन्टमा इन्स्टाग्राममा निकै बहस पनि भयो । केही मानिसहरु तस्बिरमाथि आपत्ति जताएका छन् भने कतिलाई यी प्रयोगकर्ताको कमेन्टमा रिस उठ्यो । शीतल नामकी एक प्रयोगकर्ताले लेखिन्, ‘यदि यस्तो हो भने बलात्कारीको घरमा बलात्कार किन हुँदैन ?
भास्कर प्रतिक नामका प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘यो सबै टिआरपी पाउने एक स्टन्ट हो । ’ एजेन्सी
मनिषाले नयाँनयाँ पुरुष फेर्थिन्ः ऐश्वर्या
काठमाडौं । बलिउड नायिकाहरु मनिषा कोइराला र ऐश्वर्या रायबीच अहिले एकआपसमा मनमुटाव रहेको ...
अब मलाई नयाँ केही गर्नु छ
काठमाडौं । बलिउड उद्योगमा विन्दास अनि हट अवतारमा प्रस्तुत हुने नायिका हुन् माही गिल। ४० बढी ...
छोटो समयमै जान्ह्वीलाई भ्याइ नभ्याइ
मुम्बई । दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीकी छोरी जान्ह्वी कपुर छोटो समयमै व्यस्त अभिनेत्री बनेकी ...
बालीको तटमा विकिनीमा यस्ती देखिइन् साम्राज्ञी
काठमाडौं । बेला बेलामा चर्चामा आइरहने नेपाली नायिका हुन् साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह । ...
अंग प्रदर्शन गरेर फिल्म उद्योगमा टिकेका यी ‘हट’ हिरोइनहरु
एजेन्सी । भारतीय फिल्म उद्योगमा केही अभिनेत्रीहरुले आफूलाई टिकाइराख्नका लागि विभिन्न ...
के शिल्पा पोखरेलले पहिले नै बिहे गरेकी थिइन् ?
आर.जी. काठमाडौं । विगत ४० वर्षदेखि फिल्मी क्षेत्रमा एकलौटी राज गरेर बसेका फिल्मकर्मी र ३ ...
‘तीज आयो लौ तीज आयो’ भिडियो म्यूजिक बजारमा भाइरल हुँदै
काठमाडौं । रेश्मी कार्की र शोभा गौतमको स्वरमा ‘तीज आयो लौ तीज आयो’ बोलको गीत बजारमा ...
काठमाडौं । फेस अफ मारवाडी एउटा समुदायमा आधारित सौन्दर्य पेजेन्ट हो । हाल यसको दोस्रो संस्करण ...
बजारमा चिरिच्याँट्टले ल्याए नयाँ म्युजिक भिडियो
काठमाडौं । कलाकार कृष्णप्रसाद धिताल (धिताल चिरिच्याँट्ट) ले आफनो तेस्रो गीतको म्युजिक भिडियो ...
बर्दियामा १५ लाख घुससहित समातिए ३ जना इन्जिनियर
एस्ईई उत्तीर्ण दलित विद्यार्थीलाई सम्मान
सरकारको कामलाई फर्केर हेर्दा
अब ३५ वर्षसम्मका मात्रै युवा
जनतालाई पेलेर भएपनि सरकार आयु लम्ब्याउने खेलमा लाग्यो
राष्ट्रियतामाथि खेलबाड नगर्न सरकारलाई डा. शेखर कोइरालाको चेतावनी
भारतमा तीन वटा टाउको भएको शिशुको जन्म
६५ वर्षीय वृद्धले १० वर्षीया बालिकालाई शौचालयभित्र लगेपछि..